Tsiron-tany manome aina
"Ary raha mbola tany Korinto Apolosy, dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo ve ny Fanahy Masina, fony vao nino hianareo?' Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina? '" - Asa. 19:1,2.
Maro tokoa ankehitriny ny olona izay tsy mahafantatra ny asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fo, tahaka ireo mpino tany Efesosy. Kanefa tsy misy fahamarinana voaseho mibaribary toy izany ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Samy nanizingizina ny amin'io faharnarinana io na ny mpaminany na ny apostoly. Kristy koa aza efa nitarika ny saintsika handinika ny fitomboana eo amin'ny zava-maniry, mba hanehoana ny asan'ny Fanahy eo amin'ny fiainan'ny olona ara-panahy. Trohin'ny fakan'ny voaloboka ny tsiron-tany ka miely any amin'ny sampany rehetra, mba hampitombo azy sy hisehoan'ny felany ary hamoazany voa. Toy izany koa no anomezan'ny Mpamonjy ny hery mamelona avy amin'ny Fanahy Masina, izay miditra ao amin'ny fanahin'ny olona, ka manavao ny fihetseham-pony sy ny fitiavany, ary mampilefitra ny sainy hankato ny sitrapon'Andriamanitra, ka hahazoany mitondra voa sarobidy eo amin'ny asa masina tontosainy.
Tsy hita maso ny Fanahy izay miteraka izany fiovana izany, ary tsy takatry ny saina ny fomba fihazonany io herim-panahy io, ka tsy hain'ny fahalalan'olombelona. Miasa mandrakariva amin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra anefa ny Fanahy Masina. Toy izay hita eo amin'ny zavaboary, dia toy izany koa no fiasan'ny Fanahy ao amin'ny olona. Arovan'ny herin' Andriamanitra isan'ora isan' ora ny zavaboary; kanefa kosa tsy amin'ny fanaovana fahagagana mivantana no iarovan'Andriamanitra antsika, fa amin'ny alalan'ny fitahiana mifanesisesy izay ataony eo amin'ny lalantsika mba hahazoantsika mandray ireny. Toy izany indrindra ny amin'ny fiainana ara-panahy; amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana atolotr'Andriamanitra no ahazoana mitahiry azy. Raha irin'ny mpianatr'i Kristy ny hahatratra ny fenitry ny maha-lehilahy lehibe azy, ka hahatongavany eo amin'ny "ohatry ny halehiben 'ny fahafenoan Kristy" Efes. 4:13, dia tsy maintsy mivelona amin'ny mofon'aina sy hisotro eo arnin'ny loharanom-pamonjena izy. Tsy maintsy miambina, sy mivavaka, sy miasa ary mitandrina tsara amin'ny zavatra rehetra izy, ka manaraka ny torolalana omen'ny Tompo ao amin'ny Teniny. — VM, tt. 247,248.